Prezidaant Joo Baayiden Adoolessa 4 guyyaan walabummaa Ameerikaa hamma ga’utti uummanni biyyattii dhibba irraa harki 70mni talaallii vaayiresii koronaa akka fudhatan tokkoof dhiibbaan akka godhamu labsanii jiran.
Haa ta’u malee Bulchiinsichi tarsiimoo addunyaa ka biro waliin talaallii qooddachuu maal akka ta’e hanga yoonaa hin ibsamin jira. Uummanni miliyoonni 170 Ameerikaa keessaa talaallii kan fudhatan yoo ta’u, jireenyi amma kan idileetti deebi’aa jira.
Prezidaant Joo Baayiden akka jedhanitti yoo torban kana talaallii fudhattu taatan, hanga Adoolessaa 4tti guutummaan tallaalamuun ni danda’ama. Torban Adoolessa 4 keessa ayyaana walabummaa yaaddoo malee kabajuu dandeessu jedhan.
Roobii kaleessaa prezidaanti Joo Baayiden maatiiwwan talaallii fudhatan ijoollee isaaniif kunuunsa daa’immanii, keellaalee talaalliin itti kennamu ennaa dhaqan geejjiba tolaa fi manniin rifeensa itti muratanii fi tolfatan ergaa kana uummataan ga’uu akka gargaaran akkasumas kampanileen kanneen talaallii fudhataniif dandammachiisa akka kennan jajjabeessaniiru jedha gabaasi Patsy Widakuswara.